नयाँ नेतृत्वलाई बधाई ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नयाँ नेतृत्वलाई बधाई !
२०७० फाल्गुन २३, शुक्रबार ०३:२४ गते
नेपाल पत्रकार महासंघको दसौँ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महिनौँअघिदेखि अधिवेशनको सरगर्मी बढे पनि जिल्ला शाखामा सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट हुन सकेन । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शिताको वकालत गर्ने पत्रकारहरुबीच सहमतिको संस्कार विकसित हुन सकेन । पत्रकारहरुको छाता संगठनहरुबीच भागबन्डालगायतमा सहमति हुन नसकेपछि चुनावी मैदानमा उत्रिनुप¥यो । प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारहरु एकजुट हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने पत्रकारहरु नै एकजुट हुन सकेनन् । हामी पहिले पत्रकार हौँ अनि मात्र संगठनविशेषमा आस्था राख्ने व्यक्ति हौँ भन्ने भावना जिम्मेवार ठानिएका पत्रकारहरुबीच लागू हुन सकेन । पत्रकारको अधिवेशन अरु संगठनको भन्दा कुनै पनि मानेमा फरक देखिएन । गुटबन्दी र राजनीतिको स्पष्ट छाया देखा प¥यो । श्रमजीवी, क्रियाशील र पेसाप्रति प्रतिबद्ध पत्रकारहरु अल्पमतमा परे । पत्रकारितामा सिर्जनशीलताभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रश्रय पाएको स्पष्ट भयो ।
पत्रकारहरुका संगठनभित्र चर्को गुटबन्दी देखिए, जसका कारण पत्रकारले दलविशेषलाई गुहार गर्नुप¥यो । यो एउटा गम्भीर हस्तक्षेप हो । जब पत्रकारको नेतृत्वका लागि दलभित्रबाट दबाब सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ स्वतः व्यावसायिक पत्रकारितामा बिर्को लाग्छ । पत्रकारहरुको साझा संस्थामा नेतृत्व चयनका लागि कुनै अमूक नेताको ठाडो निर्देशन हाबी हुन्छ भने महासंघ कसरी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनसक्छ ? एउटा गम्भीर बहसको थालनी हुनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । पत्रकारको निष्ठा, त्याग र समर्पणभन्दा दलीय आस्था, प्रभाव र स्वार्थले ठाउँ पाउँछ भने पत्रकारिता गर्नेहरुको नैतिकता र लक्ष्य कहाँ केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले पत्रकारहरुका यावत् समस्या निराकरणमा प्रशस्त आशंका जन्मिएको छ । यस्ता समस्याहरुको पत्रकारहरुले गम्भीर मनन् गरी समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
जिल्ला अधिवेशनमा जे–जस्ता कमजोरी देखिए पनि पत्रकारहरुले सहमति र सहकार्यको सिद्धान्तअनुरुप नै अगाडि बढ्नुपर्छ । अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्दै केन्द्रीय पार्षद्समेत निर्वाचित गरिसकेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएपछि प्राप्त नतिजालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । जित्नेहरुले जितको उन्मादभन्दा पनि चुनौतीको रुपमा लिनुपर्छ । र, हार्नेहरुले त्यसलाई सहज रुपमा लिँदै निर्वाचितहरुसँगै सहयात्रा गरी रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचित नेतृत्वलाई पत्रकारहरुको हकहितको रक्षा गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक र जिम्मेवारपूर्ण बनाउनु पर्ने दायित्व छ । अझै पनि पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै बाँकी छन् । महासंघ सबै पत्रकारहरुको साझा संस्था हो भन्ने कुरालाई मनन् गरी पत्रकारहरुको हक, हित र संरक्षणका लागि कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने कामनासहित नयाँ नेतृत्वलाई हार्दिक बधाई !